Ireo fandaharam-potoana rehetra mba handinihana ny Free Data Free Scraping Software
Misy fomba maro ahazoana angona avy amin'ny blôgy sy ny tranonkala misy anao. Ny sasany amin'ireo teknikam-pamokarana angona dia mety tsara ho an'ny mpandraharaha sy orinasa raha toa kosa ny hafa dia natao ho an'ireo tsy mpandrindra sy ireo mpikirakira hafahafa. Ny fanasitranana ny tranonkala dia teknika sarotra izay mampivadika ireo angon-drakitra ho fampahalalana voafantina. Izy io dia ampiharina raha tsy mampiasa rindrambaiko azo antoka sy azo antoka isika. Ny fitaovana manaraka dia mifandray amin'ny tranonkala ary mampiseho ireo angona ilaina amin'ny endrika voalamina.
1. Trano mahafinaritra:
Ity tranom-boky Python ity dia natao hametahana ny rakitra XML sy HTML. Mora ny mametraka sipa tsara tarehy raha mampiasa ny rafitra Ubuntu na Debian ianao.
2. Import. Io:
Import. io dia tranonkala maimaimpoana maimaim-poana izay ahafahantsika mamoritra angon-drakitra avy amin'ireo tranonkala sarotra sy tsotra ary mandamina izany amin'ny daty. Izy io no mahafantatra tsara indrindra ny interface sy ny mpampiasa azy.
Mozenda dia iray mahasoa sy mahavariana fandikana tranonkala izay mahatonga antsika ho mora ny manakona ny angon-drakitra ary manangona ny votoaty avy amin'ny tranonkala maro. Izy io dia tonga amin'ny dikan-teny maimaim-poana sy karama.
ParseHub no fitaovana fandinganana tranonkala ahafahana mametaka sary sy sary. Azonao ampiasaina ity programa ity mba hahazoana angona avy amin'ny famoaham-baovaon'olon-tsotra, portails, ary mpivarotra an-tserasera.
Octoparse no fitaovana enti-manamboatra tranonkala ho an'ny Windows. Afaka mamadika ny angon-drakitra tsy voaorina ao anaty endrika voalamina tsy mila code. Tsara ho an'ny mpandrindra ny programa sy ny mpandrindra.
CrawlMonster dia programa mahafinaritra mahatalanjona izay manompo ho toy ny mpangalatra sy mpitsikilo amin'ny tranonkala. Tena ampiasaina amin'ny SEO ny manam-pahaizana ary mamela anao hitsitsy ny vohikala amin'ny fomba tsara kokoa.
Ny Connotate dia fitaovana maoderina manala ny tranonkala. Ilainao fotsiny ny mangataka ny fifanakalozan-kevitra ary manome ohatra sasantsasany amin'ny fomba tianao hakana ny angon-drakitrao.
8. Fihetseham-po iombonana:
Fomba fiteny mahazatra manome antsika filaminana mahasoa izay azo ampiasaina amin'ny fitsikerana ny tranonkala. Izy io koa dia misy tahirin-tsakafo, ary metadata nohavaozina mba hanatsarana ny lozam-pikarohana fikarohana.
Crawley dia tamba-tranonkala maoderina maoderina sy fanamafisana ny angon-drakitra ahafahana manodina tranokalam-be maro, mamadika ny angon-drakiny ho lasa endrika struktur. Azonao atao ny mahazo ny valiny ao amin'ny format JSON sy CSV.
10. Content Grabber:
Content Grabber dia iray amin'ireo rindrambaiko maimaim-poana amin'ny tranonkala. Izany dia ahafahana manamboatra fanamafisam-peo mahazatra amin'ny aterineto.
Diffbot dia sady fitaovana maoderina no mampiavaka ny data ary mpitsikilo. Mamadika ny tranonkalanao ao amin'ny APIs, hanome anao ny vokatra tsara indrindra.
12. Dexi. Io:
13. Data Scraping Studio:
Data Scraping Studio dia mamorona data avy amin'ny tahiry HTML, XML, PDF ary tranonkala marobe. Tsy misy afa-tsy ho an'ireo mpampiasa Windows ihany.
FMiner no mpanamboatra sary maso sy rindrambaiko maimaim-poana amin'ny tranonkala izay mamolavola tetikasa miaraka amin'ny safidin-kevitry ny macro.
Grabby dia serivisy amin'ny tranonkala an-tserasera izay azo ampiasaina hanakarana ny angona avy amin'ny adiresy mailaka sy ny tranonkala. Tetik'asa mpamorona tranokala izay tsy mitaky ny fametrahana ny zavatra vita Source .